मेस्सी बार्सिलोना छाड्दै, अबको गन्तब्य कता ? « Rara Pati
मेस्सी बार्सिलोना छाड्दै, अबको गन्तब्य कता ?
२२ साउन, काठमाडौं । मेस्सीले बार्सिलोना छाड्ने भएका छन् । तर उनले क्लबाट हासिल गरेको उपलब्धिको रेकर्ड दशकौँसम्म कायम रहनसक्छ । उनले बार्साबाट ३० वटा उपाधि जितेका छन् ।
यसक्रममा सर्वाधिक ६ पटक बालोन डिुओर जित्ने इतिहास पनि राखेका छन् । उनले १० पटक लिगा र ४ पटक च्याम्पियन्स लिग जितेका छन् । मेस्सीले बार्साबाट जितेको अन्तिम उपाधि २०२०(२१ को कोपा डेल रे हो । एथलेटिक क्लबविरूद्वको फाइनलमा उनले २ गोल गरेका थिए ।
बार्साको इतिहासमा यति धेरै उपाधि र अवार्ड कसैले जितेको छैन ।
स्काइ स्पोर्ट इटालिया र आरएमसी स्पोर्टका अनुसार मेस्सी र पेरिस सेन्ट जर्मेनबीच अनुबन्धका लागि छलफल सुरु भइसकेको छ ।
​बार्सिलोनासँग करारबारे छलफल असफल भएसँगै ६ पटकका बालोन डि’ओर विजेता र पीएसजीबीच छलफल भएको बताइएको छ । छलफल सकारात्मक भए लिग वानमा बार्सिलोनाका पूर्व खेलाडी नेयमारसँग मेस्सीले पुनः खेल्न पाउनेछन् । यद्यपि, मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्नअघि पीएसजीले केही खेलाडीहरूलाई भने बेच्नुपर्ने हुन्छ ।
उता, प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटी पनि मेस्सीको सम्भावित गन्तव्यका रुपमा हेरिएको छ । लामो समयदेखि मेस्सी र पूर्व प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलको पुनर्मिलनको चर्चा चलिरहेको छ । म्यानचेस्टर इभिनिङ न्यूजसँग कुरा गर्दै क्लबका चिफ अपरेटिङ अफिसर ओमार बेराडाले क्लबसँग मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्ने स्रोत रहेको बताएका छन् ।
यद्यपि, हालै ज्याक ग्रिलिसलाई १० करोड पाउन्डमा खरिद गरेको र अझै ह्यारी केनलाई पछ्याइरहेको सिटीले मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्छ या गर्दैन भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
काठमाडौं । पुरुष विश्वकप फुटबलमा पहिलोपटक महिला रेफ्रीले खेल खेलाउने भएका छन् । कतार विश्वकपमा
युरोपेली च्याम्पियन्स – लिग लिभरपुल फाइनलमा
एजेन्सी । लिभरपुलले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको फाइनल यात्रा तय गरेको छ । गएराति भएको खेलमा
रोनाल्डोको गोलमा युनाइटेडको सानदार जित
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत सोमबार राति भएको खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले ब्रेन्टफोर्डलाई ३–०
एन्फा अध्यक्ष कर्माले भने– चुनाव छ, प्रशिक्षकलाई केही गर्न सक्दैन
काठमाडौं । आगामी ६ असारमा हुने निर्वाचनसँगै अहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० निकै व्यस्त
चेल्सीलाई पराजित गर्दै रियल सेमिफाइनलमा
काठमाडौं । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । मंगलबार